Author Topic: Waa maxay Endometriosis? (Read 20893 times)
« on: June 26, 2009, 02:03:02 PM »
Endometriosis waa xaalad guud oo saameysa boqolkiiba toban dumar ah.
Waa xaalad baadanaa ku jira ilmo galeenku laga helo meelo aan caadi ahayn oo jirka ah. Badanaa inkastoo, endometriosis laga helo lafaha miskaha. Tani waxay dhalin kartaa astaamo badan sida xanuun miskeed iyo madhaleysnimo.
Waxa sababa ee saxda ah ee endometriosis weli lama yaqaan. Hadalka ugu caamsan waxaa weeye inta caadadu ay ku hayso. Unuga caadadu wuxuu dhaafaa dib dib isagoo sii dhexmaraya tubooyinka fallopian tubes iyo lafaha miskaha dhexdooda halkaas oo ay ku dhegan tahay oo ku korto.
Endometriosis wuxuu u eg yahay inuu u socdo qoys qoys ahaan, markaa waxaa laga yaabaa inaad qabto haddii hooyadaa ama naag kale oo qoyskaaga ahi ay qabtay.
Side baa loo wiisateeyaa?
Dhakhtarka ayaa kaala hadli doona astaamahaaga oo sidoo kale sameyn doonaa baaritaan jireed. Tani waxay siinaysaa dhakhtarka macluumaad ku filan oo looga shakiyo inaad qabto endometriosis.
Haddii ay qof dumar ahi ku qabto endometriosis ugxan sidaheeda sawirka ultrasound-ka ayaa laga yaabaa inuu muujiyo laakiinse had iyo jeer ma aha. Wiisateyn go’an ayaa la sameyn karaa oo keliya haddii aad haysato laparoscopy ama qaliin furan.
laparoscopy waa nidaam, halkaas oo weyneeso yar lagaa gelinayo jeexdimo yar oo calooshaada ah.
Laparoscopy-gu wuxuu faa’iido u leeyahay wiisatada iyo weliba wuxuu caawiyaa inuu muujiyo inta khatarta endometriosis ay le’eeg tahay. Tani waxay sidoo kale caawineysaa dhakhtarku kuu qorsheeyo daaweynta ugu fiican.
Baaritaanka dhiiga ama in ‘cad yar’ lagaa gooyo si loo baaro ayaa la sameyn doonaa si loo xaqiijiyo wiisatada. Tani waa muhiim sababtoo ah mar marka qaarkood endometriosis waa lagu wareeri karaa xaalado kale oo jira awgood.
Dhibaatooyinkee ayey dhalin kartaa?
Dumarka badidiisu waxay qabaan endometriosis aan wax astaamo ah lahayn ama dhibaato laakiinse sidaan ma aha had iyo jeer.
Astaamaha caamka ah ee endometriosis waxaa ka mid ah:
Ø Xannuunka caadada
Ø Xannuunka xilliga galmada
Ø Xannuunka miskaha ee wakhtiyada kale ee wareega caadada
Ø Dhabar xannuun
Ø Tamar yari
Ø Xannuun leh socodka caloosha.
Dhammaan astaamahan waxay leeyihiin astaamo kale oo dhalin kara oo suurto gal ah.
Dumarka qaarkii ay dhibi ka haysato uur qaadista waxaa la arkay inay qabaan endometriosis, xitaa iyagoon lahayn astaamo kale.
Sidee bay u saameysaa endometriosis uur qaadista?
Waxaa jira sababo badan oo dhaliya ma dhaleysnimada waxaana laga yaabaa inay jiraan wax ka badan hal sabab ah lammaane kastaa. Endometriosis waxaa laga heli karaa dumarka ay dhibka ka haysato inay uur qaadaan. Inta ugu yar ee dumarkan unug nabar ah oo uu sababey endometriosis ayaa sababi kara inay xirmaan tuunbooyinka Fallobpianku.
Si kastaba ha ahaatee , dumarka badidooda ma cadda sababta uu endometriosis u saameynayo uur qaadistooda. Hadalada waxaa ka mid ah in endometriosis:
§ Uu sababo ukumaha aysan u ekeyn inay bacrimismayaan
§ Ku soo saarida sun dabiici ah shahwada.
Maxaa dhacaya haddii aan la daaweyn endometriosis ?
Endometriosis-ka fududi badanaa uma baahna daaweyn. Badanaa waxaa lagu siinayaa daaweyn kaa caawisa inay kaa yareyso astaamaha intii ay ‘daaweyn’ lahayd cudurka laftiisa.
Haddii aan la daaweyn, qaar ka mid ah endometriosis way roonaanayaan iyadoon waxba lagu sameyn laakiin badidoodu sidooda uun bay ahaanayaan. Qaar aad bay u xumaanayaan haddii aan la daaweyn.
Dumarka badidiisa leh endometriosis, astaamuhu way iska baaba’ayaan markay dumarku gaaraan xaalada dhalmo deyska. Go’aanminta in la daaweeyo iyo in aan la daaweyn endometriosis waxay badanaa ku xiran tahay isbarbardhigada khatarta daawada iyo saameynta endometriosis uu ku yeelanayo noloshaada.
Waa maxay daaweyntu?
Endometriosis waxaa loo daaweyn karaa waado ahaan (daawo ama daraagis) ama qaliin.
Mar marka qaarkood labada daawoba iyo qaliinkaba waa la isticmaalaa. Dumarka qaarkood sidoo kale waxay faa’iido ka helaan daaweyn kale oo taas bedel keed ah.
Daawooyinku waxay u dhaxeeyaan daawooyinka xannuunka jebiya (sida barasatamool iyo daawooyinka huritaanka lau daaweeyo non-steroidal anti-inflammatories) ee hormoonka lagu daaweeyo ee cadaadiya sameysanka ugxantan iyo caadadaba).
Waxaa la isticmaali karaa qaliin si loo gooyo ama gubo endometrioses. Qaliinka ugu caansan ee la isticmaalo waa laparoscopy (qaliinka dalool yar sameynta).
Haddii ay ugxan dhalayaashu ay ka kooban yihiin cysts ka endometriosis kuwan waxaa si wanaagsan loogu daaweeyaa qaliin maadaama aysan u ekeyn inay sidooda u baaba’aan dawona aan lagu daaweyn karin.
Qaliinka waxaa laguarkay inuu hagaajinayo wax dhalida dumarka qaba endometriosis dudud. Daaweynta endometriosis aadka u daran, khaas ahaan haddii ay jirto cysts ugxan sidayaasha, sidoo kale wuxuu u eg yahay inuu hagaajinayo ilmo dhalista inkastoo aan tan si buuxda oo xaqiijin.
Daaweyntu ma muujin inay hagaajineyso ilmo dhalista.
Waxyaalaha kale ee dhaliya ma dhaleysnimada waa in la raadiyaa oo la daaweeyaa.
Xannuun ka daaweynta
Marka xannuunku yahay dhibka ugu weyn, daaweyntu waxay ujeedadeedu tahay inay kaa debciso astaamaha iyo inay xannuunka kaa yareyso. Daaweynta ugu weyni waa:
Ø Xannuun jebiyayaal sahlan (barsatamool iwm)
Ø Daaweynta hormoonka(kiniini iwm)
Xannuun jebiyayaasha sahlan
Dumar badan ayaa dareemi doona waxoogaa ah in astaamuhu kaga jabaan daawooyinka ay farmasiga ka gataansida barsatamoolka (Panadol®) iyo kiniiniyada kale ee kaa dejiya huritaanka iyo xannuunka saa’idka ah ee (Ponstan®, Nurofen®, Naprogesic® iwm).
Daaweynta hormoonka waxaa loo isticmaalaa inay cadaadiyaan wareega caadiga ah ee caadada, kaasoo joojiya ama gaabiya koritaanka endometriosis. Habka ugu sahlan ee lagu heli karo tan waxaa weeye qaadashada “kiniiniga”( “the pill”). Daaweynaha kale hormoonka, ee lagu arkay inay wax ku ool yihiin xagga yareynta xannuunka la xiriira endometriosis, ayaa sidoo kale la heli karaa.
Dumarka qaarkii waxay arki doonaan waxyeelo ay leedahay daaweynta hormoonku.
Qaliinka ayaa laga yaabaa in la sameeyo marka ugu horeysa si u caawiso sameynta wiisitada. Dumarka qaarkii waxaa lagu sameeyaa qaliin sababtoo ah ma doonayaan inay daawo qaataan amase sababtoo ah daawadu waxba uma tarin.
Ujeedada qaliinka laparoscopy (qaliinka –daloolka- furaha oo kale) waxaa weeye in la sameeyo wiisitada iyo in la daaweeyo dhammaan endometriosis muuqda. Kan waxaa lagu sameeyaa laysar ama dhaytarmi ( diathermy), kaas oo baabiinaya endometriosis isagoo gubaya. Bedel ahaan waxyaalaha ah endometriosis waa la jari karaa.
koox yar oo dumar ah oo leh astaamo daran oo aysan ka debcineynin daawadu ama daaweynaha kale ee qaliinka, qaliinka aadka uga balaaran sida hysterectomy iyo goynta ugxan sidaha ayaa laga yaabaa in laga fekero.
Mar marka qaarkood endometriosis wuxuu wax yeelaa gidaarada caloosha . markay tani dhalineyso astaamo waa weyn waxaa laga yaabaa in lagu taliyo in qaybta caloosha ah ee wax qabta la gooyo. Tani waxay ku lug yeelanaysaa qaliin calooleed waana wax aan caam ahayn.
Waxyaalaha aad tixgelinayso Waxba haddii aan la sameyn (daawo la’aan):
§ wax waxyeelo daawo ahi ma jiri doonto
§ khatar qaliin ma jiri doonto
§ astaamaha waxaa laga yaabaa inay iskood u hagaagaan.
§ astaamaha badidoodu way sii soconayaan
§ astaamaha qaarkood waxaa laga yaabaa inay sii xumaadaan.
Xannuun jebiyaha sahlan (Barasatamol, Nuurofen®):
§ si sahlan baa loo helaa
§ waxyeeladu wax caam ah ma aha
§ badanaa waxba ma tarto
§ khatar ah boog calooleed markaad qaadato Nurofen® iwm.
Daawooyinka sida Progesterone-ta oo kale ah:
§ xannuunka oo yaraada
§ caado la’aan ama mid aan wakhti caadi ah lahayn
§ waxay yareysaa koritaanka endometriosis xaaladaha badidooda
§ qaar waa waxyaalaha dhalmada ka hortaga.
§ waxyeelo – culeyska oo bata, qaab farxadeed iyo xanaaga oo aad yeelato, findoob, timaha oo kugu kordha, calool majiir, naaso jileec
§ astaamaha waxaa laga yaabaa inay soo noqdaan marka daaweynta la joojiyo
§ waxaa laga yaabaa inaysan cannuunka baabiin
§ ma hagaajiso ilmo qaadista
§ waa inaadan uur qaadin intaad daawo qaadaneyso
§ ma aha dhammaan waxyaalaha uurka ka hortaga.
Dhalmo deysnimada-daawooyinka dhaliya:
§ wax caado ah ma leh
§ xaaladaha badidooda waxay joojisaa koritaanka endometriosis.
§ waxyeelada – kuleyl, dhidid
§ lafaha oo ku dhuubta haddii la isticmaalo wax ka badan lix bilood
§ astaamaha waxaa laga yaabaa in la helo haddii daawada la joojiyo
§ waa inaadan uur qaadin intaad daawada qaadaneyso
§ ma aha uur ka hortage
§ waxaa laga yaabaa inuusan xannuunka baabiin.
Kiniiniga laysku daray ee uurka ka hortaga:
§ waa uur ka hortage
§ waxaa loo qaadan karaa inuu yareeyo ama joojiyo caadada.
§ waxyeelada – yalaalugo, culeyska oo kordha
§ waa inaadan uur qaadin intaad qaadaneyso
§ khatar yar oo ah xinjirow lugaha ama lambabada.
§ wiisito xaqiiq ah
§ daawoobitaan wakhti dheer qaata 70% oo dumar ah
§ looma baahna in la isticmaalo daawo wakhti dheer.
§ looma daaweyn karo sidaan dhammaan endometriosis-ka
§ waxaa jirta khatar qaliinku leeyahay
§ waxaa laga yaabaa inuusan daaweyn xannuunka
§ endometriosis ku soo noqnoqda 30% oo dumar ah.
Hysterectomy iyo goynta endometriosis:
§ helitaanka daaweyn wakhti dheer qaadata in ka badan 90% oo dumar ah
§ inaadan u baahan daawo inaad isticmaasho
§ wax caado ah oo danbe inaadan helin.
§ khataraha qaliinka oo ka weyn qaliinka laparoscopy
§ waxay baabiisaa ilmo qaadista
§ dumarka qaarkood waxay ka gadoodaan ilmagaleenka ay waayaan
§ waxaa laga yaabaa in loo baahdo HRT haddii ugxan sidaha la gooyo
§ waxaa laga yaabaa inuusan daaweyn xannuunka.
Daaweynta bedelka ah iyo dhameystirkaba
Waxaa jira daaweyn kala duwan oo laga heli karo oo dhameystiri karta daaweyntaada caafimaad ama bedeli karta daaweynta caafimaad. Ta ugu caansani waa daaweynta shiineyska ee caadada ah iyo diyaarinta geedaha wax lagu daaweeyo. Dumarka qaarkii waxay ku arkaan horumar xagga astaamaha ah tan laakiinse ma jirto caddeyn sayniseed weli oo leh daawada shiineysku waxay yareyn kartaa astaamaha ama waxay hagaajin kartaa ilmo qaadista .
Haddii aad isticmaasho daaweyn dhameystir ahaan ah waxaa wax garad wanaagsan ah inaad kala hadasho isticmaalkooda dhakhtarkaaga maadaama ay saameyn karaan daawooyinka kale ee laguu qoray.
Markayna daaweyntu wax ka qaban astaamaha
Daaweynta ugu danbeysa ee endometriosis waa hysterectomy – oo ah goynta ilmo galeenka (ilmogaleenka) iyo goynta ugxan sidayaasha iyo dhammaan endometriosis. Tani waa qaliin weyn oo micnihiisu yahay ma jiro doono uur qaadis suurto gal ahi. Nasiib darro, dumarka qaarkii weli waxay qabi doonaan astaamo xitaa markay cadahay in dhammaan endometriosis si hagaagsan loo daaweeyey.
Waxaa sidoo kale suurto gal ah marka daawooyinku ama qaliinku aysan hagaajin astaamaha, astaamuhu waxaa laga yaabaa inaysan astaamahani ahayn endometriosis awgii. Xaaladaan waxaa laga yaabaa inaad u baahato baaritaan dheeraad ah oo lagu raadinayo sababo kale oo suurto gal oo keenaya astaamaha. Dumarka qaarkii weligood uma helayaan sababta dhalineysa xannuunkooda waxaana loo daaweynayaa si looga yareeyo astaamaha oo loo hagaajiyo tayada noloshooda.
Haddii aysan ahayn endometriosis, maxay tahay?
Xannuunka lafaha miskaha waxaa dhalin kara tiro ka mid ah xaaladaha caafimaadka dumarka oo ay ka mid yihiin:
§ adenomyosis (waa xaalad uu laabatada gudaha ilmagaleenku god ku sameeyo muruqyada ilmo galeenka)
§ infekshinka lafaha miskaha sida Chlamydia
§ nabar unug (iskuxirka) uu dhaliyey qaliin hore
§ infekshinka ama cudur hore oo ah huritaanka miskaha
§ dhuumaha ilmo galeenka.
Xannuunka lafaha miskaha waxaa sidoo kale dhalin kara xaalado kale oo aan ahayn caafimaadka dumarka sida:
§ calaamad calooleed kukicineysa
§ cudur calooleed huraya (tusaale cudurka Crohn)
§ dhibaato kaadiheyseed sida infekshin soo noqnoqda ama huritaan.
Qofka dumarka ah ee qabta xannuunka lafaha miskaha waxaa laga yaabaa inaysan garan waxa sababaya jir ahaan, laakiin waxaa laga yaabaa inay mar marka qaarkood noqoto sababta ama inay sii xumeyso qodobo cilmi nafsiyeed oo ay ku jiraan waxyeelo jireed ama
galmo oo hore.
Ugu danbeyntii, waxaa laga yaabaa inay ku dhacdo dumarka uu muuqda inay leeyihiin caafimaad hormoon iyo taran oo caadi ah. Dhakhaatiirta waxaa laga yaabaa inaysan garaneynin waxa dhalinaya xannuunka.
« Reply #1 on: August 07, 2009, 03:00:19 PM »
« Reply #2 on: August 09, 2009, 03:51:35 PM »
Views: 53279 May 22, 2009, 01:41:01 PM
Views: 54078 February 05, 2008, 07:56:57 AM
Views: 49657 September 01, 2009, 02:23:15 PM
Views: 34712 May 06, 2018, 01:17:25 PM
Views: 33597 January 22, 2019, 08:47:10 PM